5 tabaha SEO ee Instagram si aad u kordhiso gaadhistaada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/5 Talooyinka SEO ee Instagram si aad u kordhiso Gaadhistaada
5 Talooyinka SEO ee Instagram si aad u kordhiso Gaadhistaada
Sideed uga dhex muuqan kartaa badda in ka badan hal bilyan oo isticmaalayaasha Instagram ah? Instagram SEO waa meel fiican oo lagu bilaabo. Helitaanka macluumaadkaaga bogga natiijooyinka raadinta waxay kaa caawin kartaa fidinta gaadhistaaga dabiiciga ah.
Fahamka sida SEO ee Instagram-ka ugu shaqeeyo waxay muhiim u tahay ganacsi kasta oo raba inuu ku xidhmo kuwa raacsan cusub. Aan quusno.
Waa maxay Instagram SEO?
Instagram SEO waxay la macno tahay in la wanaajiyo macluumaadkaaga Instagram si loogu ogaado natiijooyinka raadinta. Marka qof ka dhex raadiyo erayga muhiimka ah ama hashtag ku dhex jira sanduuqa raadinta Instagram, waxaad doonaysaa in koontadaada ama waxa ku jira ay ka soo muuqdaan meel u dhow liiska ugu sarreeya.
Qodobbada darajada SEO ee Instagram
SEO, guud ahaan, waa farshaxan yar, cilmi yar. Instagram SEO ma aha mid ka duwan. Ma jirto qaacido sax ah oo lagu ridi karo akoonkaaga meesha ugu sareysa ee qiimeynta raadinta.
Nasiib wanaag, Instagram waxay u furan tahay calaamadaha ay u isticmaasho si loo qiimeeyo natiijooyinka raadinta. Waa kan sida ay u go'aamiso waxa uu qof arko marka ay isticmaalayaan barta raadinta Instagram.
La yaab ma leh in waxa qof ku qoray bar raadinta ay tahay calaamadda ugu muhiimsan ee wax lagu baadho. Iyada oo ku saleysan shuruudaha raadinta, Instagram waxay raadisaa isticmaaleyaal ku habboon, bios, qoraallo, hashtag, iyo goobo.
Tan waxa ay uga dhigan tahay summada: Waxaad u baahan tahay inaad fahamto ereyada raadinta ee dadku isticmaalaan si ay u raadiyaan macluumaadka adiga oo kale ah. Falanqaynta Google, Hootsuite Insights, iyo aaladaha kale ee la socodka bulshada ayaa kaa caawin kara inay ku siiyaan aragtida erayada ay dadku u adeegsadaan raadinta ganacsigaaga.
Tan waxa ku jira hashtags iyo akoonnada isticmaaluhu raacay oo la falgalay, iyo qoraallada ay hore u daawadeen. Xisaabaadka iyo hashtaggu isticmaaluhu waxa uu la falgalaa darajo ka sarraysa kuwa aanay samayn.
Waa kuwan natiijooyinka raadinta markii aan "safarka" ka raadiyo akoonkayga Instagram ugu weyn, halkaas oo aan raaco oo aan la falgalo qorayaal badan oo safar ah iyo noocyada safarka:
Waxaan raacaa dhammaan afarta natiijooyin raadin ee ugu sarreeya oo aan la falgalay dhammaantood wakhti hore.
Waa kuwan natiijooyinka ugu sarreeya ee isla ereyga raadinta—“safar”—laga bilaabo akoonkayga Instagram-ka sare, halkaas oo aan raaco xisaabaadyo aad uga yar oo aanan diiradda saarin safarka:
Afarta xisaabood ee ugu sarreeya ee lagu taliyay gabi ahaanba way kala duwan yihiin. Sababtoo ah ma lihi taariikh lasocod iyo la qabsiga xisaabaadka safarka ee boggan Instagram, Instagram waa in ay ku tiirsato calaamado kale si loo xoojiyo natiijooyinka.
Maxay tani uga dhigan tahay sumadaha: Mar labaad, dhammaan waxay ku saabsan tahay cilmi-baarista. Fahmo hashtagyada ay u badan tahay in dhageystayaasha bartilmaameedku adeegsadaan oo ay la falgalaan. Oo ku dhiiri geli ka qaybgalka qoraaladaada.
Qofka isticmaalaya raadinta waxay aad ugu dhowdahay inuu arko nuxurka summada ay horay ula soo shaqeeyeen, xitaa haddii aysan (wali) raacin astaantaas.
Mawduuca horay caan u ahaa waxay u badan tahay in lagu daro darajada sare ee natiijooyinka raadinta. Instagram ayaa go'aamisa caannimada iyadoo la adeegsanayo calaamadaha sida tirada gujisyada, jecel, wadaaga iyo raacitaanka akoontiga, hashtag, ama meel.
Tan waxa ay uga dhigan tahay summada: Ku dhaji wakhtiga saxda ah si aad u kiciso ka qaybgalka isla markaaba. Ka qayb qaadashada hore waxay calaamad u tahay caannimada waxayna ku siinaysaa macluumaadkaaga kor u kaca raadinta inta ay wali khusayso oo cusub tahay. Hootsuite waxay kaa caawin kartaa habaynta wakhtiga ugu fiican ee lagu daabaco talooyinka.
5 xeeladaha SEO ee Instagram si loo kordhiyo gaadhistaada
1. U wanaaji astaantaada Instagram si aad wax u raadiso
Boggaga Instagram-ka (loo yaqaan Instagram bio) waa meesha ugu fiican ee lagu daro ereyada muhiimka ah ee khuseeya iyo shuruudaha raadinta.
Instagram bio SEO waxay ku bilaabataa magaca Instagram SEO. Dooro gacan-ku-haynta iyo magaca astaanta guud ee khuseeya macluumaadkaaga. Haddii aad si fiican loogu yaqaan magacaaga sumadda, markaa taasi waa meesha ugu fiican ee aad ka bilaabi karto. Haddii ay jirto meel loogu talagalay ereyga muhiimka ah ee gacantaada ama magacaaga, ku dar taas sidoo kale.
U fiirso dhammaan xisaabaadka ka soo muuqday natiijooyinka raadinta sare ee safarka - ee labada profile - waxaa ku jira ereyga "safar" gacantooda ama magacooda ama labadaba.
Sidoo kale, iska hubi inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee khuseeya bio-gaaga. Kumaad tahay, maxaadse ka wada tihiin? Nooc noocee ah ayay dadku (iyo mashiinka raadinta Instagram) filan karaan inay ka helaan shabaggaaga?
Ugu dambeyntii, hubso inaad ku darto meel noolahaaga haddii ay khusayso ganacsigaaga. Kaliya Ganacsiga iyo koontooyinka abuuraha ayaa ku dari kara meel, marka tani waa hal sabab oo kale oo aad ugu beddesho akoon xirfadaysan haddii aanad horeba sidaas u samayn.
Si loogu daro goobta astaanta u ah Instagram bio SEO, fur abka Instagramka oo taabo kaaga astaanta astaanta guud. Fiiri edit Profile, ka dibna Kala Xulashada. Geli ciwaankaaga, adigoo ah mid gaar ah ama mid guud sidaad rabto. Waxaad geli kartaa ciwaankaaga gaarka ah haddii ay taasi khusayso, ama isticmaal uun magaaladaada.
Hubi in aad daartid baarka slider-ka Muuji macluumaadka xiriirka.
Goobtaadu waxa ay ka muuqataa kaliya bogga profile kaaga ee abka, maaha nooca shabakada ee Instagram. Laakin marka ay ku xidhato akoonkaaga, waa calaamada darajo ee mashiinka raadinta Instagram iyadoon loo eegin haddii dhagaystayaashaadu isticmaalayaan abka ama shabakada.
Si aad u hesho tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan ka dhigista astaantaada Instagram mid la ogaan karo, ka hubi boostadayada oo dhan ee ku saabsan sida loo qoro bio Instagram weyn.
2. Isticmaal hashtagyada saxda ah
Iyadoo muddo dheer loo tixgeliyey khiyaano gudaha ah si loo qariyo hashtagyada faallooyinka, Instagram ayaa hadda shaaca ka qaaday in ereyada muhiimka ah iyo hashtags ay si toos ah uga soo muuqdaan qoraalka si ay u saameeyaan natiijooyinka raadinta.
Waxay sidoo kale dhawaan wadaageen qaar ka mid ah tabaha hashtag gaarka ah ee muujinta natiijooyinka raadinta:
Isticmaal kaliya hashtagyada khuseeya
Isticmaal hashtags kuwa sida fiican loo yaqano, niche, iyo gaar ah (ka fikir sumad ama olole ku salaysan).
Ku xaddid hashtagyada 3 ilaa 5 boostada.
Ha isticmaalin hashtag aan khusayn ama xad dhaaf ah oo guud sida #explorepage.
Isticmaalayaasha Instagram ayaa xoogaa la yaabay talada lagu xaddidayo tirada hashtagga. Ka dib oo dhan, Instagram wuxuu u oggolaanayaa ilaa 30 hashtags boostada. Laakiin talada Instagram waa caddahay: "Ha isticmaalin hashtag aad u badan - ku darista 10-20 hashtags kama caawin doonto inaad hesho qaybin dheeri ah."
Marka, waa maxay hashtagyada SEO ugu fiican ee Instagram?
Taasi waxay ku xidhan tahay ganacsigaaga iyo dhagaystayaashaada. Si aad u fahamto hashtagsyada ay mar horeba u wadaan taraafikada qoraaladaada, eeg Insights kaaga. Aragtida qoraal kasta ayaa kuu sheegi doonta inta riyo ee boostadaas ka timid hashtags.
Haddii aad isticmaashay hashtagyo badan, falanqaynta Instagram kuuma sheegi doonto sida saxda ah kuwa sameeyay qaadista culus. Laakiin haddii aad ku dheggan tahay 3 ilaa 5 hashtag ee lagu taliyay, waa inaad awood u yeelatid inaad go'aamiso kuwa sida joogtada ah u wado taraafikada waqti ka dib.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa dhegeysiga bulshada si aad u aragto hashtagyada dadka aad beegsanayso, tartamayaashaada, iyo saameeyayaasha warshadahaaga ay isticmaalayaan.
Ugu dambeyntii, waxaad isticmaali kartaa barta raadinta Instagram si aad u ogaato ereyada muhiimka ah ee caanka ah oo aad barato hashtagyada dadka aad raacdo ay xiiseynayaan. Kuwani waxay u badan tahay inay la falgalaan daawadayaashaada, sidoo kale.
Tag bogga Baadhitaanka Instagram oo ku qor hashtag (oo ay ku jirto # calaamadda) gudaha baararka raadinta. Waxaad arki doontaa mid ka mid ah dadka aad raacdo kuwaas oo horey u raacay calaamadahan. Haddii aad raadiso hashtag guud (sida #travel), waxaad sidoo kale arki doontaa qaar ka mid ah hashtag gaar ah oo siinaya dheelitirnaan wanaagsan guud ahaan, niche, isku dhafka gaarka ah ee Instagram ayaa ku talinaya.
Bogga natiijooyinka raadinta ee kelmad kasta oo muhiim ah (eeg tilmaanta xigta) sidoo kale waxaa ku jira a Tags tab. Ku dhufo si aad u aragto hashtagyada ugu caansan erayga muhiimka ah, oo ay la socoto tirada guud ee qoraallada mid kasta.
3. Isticmaal ereyada muhiimka ah ee saxda ah
Waagii hore, raadinta Instagram ma tixgelin ereyada muhiimka ah ee qoraallada, laakiin taasi waxay u muuqataa inay isbedelayso. Instagram hadda waxay si gaar ah ugu talinaysaa in lagu daro ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah qoraallada la soo dhejiyo si ay uga caawiyaan helitaanka.
Taasi waa sababta oo ah waxay bedelayaan sida natiijooyinka raadinta loogu adeego. Waagii hore, natiijooyinka raadinta waxa ku jiray oo kaliya xisaabaadka khuseeya, hashtagyada, iyo meelaha.
Hadda, natiijooyinka raadinta sidoo kale waxaa ku jira boggaga natiijooyinka erayga muhiimka ah ee loogu talagalay wax raadinta. Kani waa war weyn oo loogu talagalay noocyada caanka ah ee yar yar, maadaama ay dadka siinayso fursad wanaagsan oo ay ku helaan macluumaadkaaga adoon raadin magaca akoonkaaga gaarka ah.
Gujista mid ka mid ah boggaga natiijooyinka ereyga muhiimka ah (oo lagu tilmaamay muraayad weynayn) waxay furaysaa bog buuxa oo nuxur ah si loo baadho. Bog kasta oo ka mid ah natiijooyinka ereyga muhiimka ah asal ahaan waa bog sahamin ereyga muhiimka ah ee gaarka ah. U fiirso Tags tab, kaas oo kaa caawin kara inaad daaha ka qaaddo hashtagyada ugu caansan eray kasta oo muhiim ah.
Haddaba, sidee ayaad u dooranaysaa ereyada muhiimka ah ee aad beegsanayso? Cilmi-baarista aad ku samaysay tillaabada sare si aad u ogaato hashtaggaaga ugu fiican waxay ku siin doontaa tilmaamo bilow ah.
Qalabka falanqaynta ayaa ku siin doona aragti dheeraad ah. Tusaale ahaan, isticmaal Google Analytics si aad u aragto ereyada muhiimka ah ee u horseedaya taraafikada boggaaga. Kuwani waxay u badan tahay inay yihiin musharixiin wanaagsan oo lagu tijaabiyo qoraalladaada Instagram.
Hootsuite Insights oo ay ku shaqeyso Brandwatch waa qalab kale oo wanaagsan oo loogu talagalay raadinta ereyada muhiimka ah. Isticmaal ereyga sifada daruuraha si aad u daaha ka qaaddo ereyada caadiga ah ee loo isticmaalo summadaada, warshadaha, ama hashtagyadaada.
4. Kudar qoraal alt sawirada
Qoraalka Alt ee Instagram waa sida qoraalka alt ee shabakada. Waa sharaxaad qoraal ah oo sawir ama muuqaal ah taasoo ka dhigaysa waxa ku jira inay heli karaan kuwa aragga naafada ka ah. Waxa kale oo ay bixisaa sharaxaad ku saabsan waxa ku jira haddii sawirka laftiisa uu ku guuldareysto inuu soo shubo.
Instgram alt text sidoo kale waxay faa'iido u leedahay inay ka caawiso Instagram inay si fiican u fahmaan waxa ku jira waxa ku jira, oo sidaas darteed si fiican u fahmaan inay ku habboon tahay raadinta gaarka ah.
Instagram waxay isticmaashaa tignoolajiyada aqoonsiga shayga si ay u abuurto sharaxaad toos ah sawir kasta kuwa isticmaala akhristaha shaashadda. Macluumaadkani waxa kale oo uu bixiyaa macluumaadka algorithm-ka Instagram iyo natiijooyinka raadinta ee ku saabsan waxa ku jira sawirkaaga.
Dabcan, qoraalka alt-ka tooska ah waligiis uma noqon doono tafatiran sida qoraalka alt ee uu aadanaha abuuray. Tusaale ahaan, waa kan qoraalka alt-ka ee iskeed u soo saaray ee sawirka aan ku dhejiyay Instagram.
(Fiiro gaar ah: Waxaad iska hubin kartaa qoraalkaaga alt-ka ah ee si toos ah u soo saaray adiga oo daaraya akhristaha shaashadda taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga.)
Sawirku si cad waa shinni, laakiin qoraalka alt ee Instagram wuxuu u kala saarayaa "ubax iyo dabeecad." Intii aan ereyga "shinni" u adeegsaday qoraalkayga, bixinta qoraalka alt ee caadiga ah halkan waxay ku siinaysaa khibrad wanaagsan kuwa qaba cilladaha aragga iyo sidoo kale soo dirida alt text Instagram SEO calaamadaha.
Si aad qoraal alt ah ugu darto markaad sawir dhejiso, taabo Goobaha Habboon dhanka hoose ee shaashadda meesha aad ku qorto qoraalkaaga.
Hoos Helitaanka, taabo Qor Alt Text kuna dar sharaxaad sawir adoo isticmaalaya ereyada muhiimka ah ee khuseeya.
Si loogu daro qoraalka alt sawir jira, fur sawirka oo taabo icon saddex dhibcood, ka dib dhagsii Edit. Dhinaca midig ee sawirka, taabo Wax ka beddel qoraalka Alt.
Geli qoraalkaaga alt, ka dibna taabo calaamad buluug ah.
Qoraalkan cusub ee alt aad ayuu uga saxsan yahay, waxaana ku jira ereyada muhiimka ah ee dadku isticmaali karaan si ay u raadiyaan macluumaadka sidan oo kale ah. Waa istaraatijiyad tayaynta Instagram fudud.
5. Ilaali xisaab tayo leh
Natiijooyinka raadinta Instagram sidoo kale waxay ku saleysan yihiin Tilmaamaha Talooyinka Instagram. Taas macnaheedu waxa weeye xisaabaadka ka soo horjeeda xeerarkan waxay u muuqan doonaan kuwo hoose natiijooyinka raadinta ama aan ka soo muuqan raadinta gabi ahaanba.
Maskaxda ku hay in Tilmaamaha Talooyinku ay ka adag yihiin Xeerarka Bulshada. Marka la soo koobo, haddii aad ku xad-gudbiso Tilmaamaha Bulshada, waxa ku jira waxa laga saarayaa Instagram-ka gabi ahaanba. Haddii aad ka hortimaado Tilmaamaha Talooyin, waxa aad ka kooban tahay weli waxa ay ka soo muuqan doontaa goobta, laakiin way adkaan doontaa in la helo.
Raadinta Instagram waxay ka fogaataa inay ku taliso waxyaabo "tayo hoose leh, la diidi karo, ama xasaasi ah," iyo sidoo kale macluumaadka "laga yaabo inaan ku habboonayn daawadayaasha da'da yar." Tusaalayaal gaar ah oo aan la samayn karin waxaa ka mid ah:
Clickbait ama sed hawlgelinta
Sheegashooyinka caafimaadka ee la buunbuuniyay
Xogta aan asalka ahayn ayaa laga soo minguuriyay ilo kale
Sheegashooyinka marin habaabinta ama nuxurka
Iibsiga waxyaabaha jecel
Isticmaal Hootsuite si aad u jadwaleyso qoraalada Instagram wakhtiga ugu fiican, uga jawaabto faallooyinka, ula socotid tartamayaasha, oo aad cabbirto waxqabadka - dhammaan waxaad ka socotaa dashboard-ka aad isticmaasho si aad u maamusho shabakadaha kale ee bulshada. Bilow tijaabadaada bilaashka ah maanta.
Lacag-bixineed vs. Warbaahinta Bulsho ee Dabiiciga ah: Sida Labadaba Looga Dhex Geliyo Istaraatiijiyadaada
20-ka ugu Fiican ee Wada sheekaysiga Tooska ah Plugins & Taageerada Tigidhada ee WordPress